Ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AFRIKA Abadlali beBhola eKhatywayo base-Ivory Coast U-Eric Bailly Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Defender owaziwa kakhulu ngegama lesidlaliso "Urhirho". Ibali lethu le-Eric Bailly Childhood Indaba kunye ne-Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukusuka kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, imvelaphi yentsapho, ubuhlobo bentsebenziswano, kunye nezinye iinjongo ze-OFF (ezingaziwa) malunga naye.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba uyindawo yokukhusela. Nangona kunjalo, bambalwa abajonga u-Eric Bailly's Bio onomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
U-Eric Bailly Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
Ukuqala, amagama akhe apheleleyo nguEric Bertrand Bailly. U-Eric Bailly njengoko ebizwa ngokuba ngumntu ozalelwe rhoqo wazalwa ngo-12th of April 1994 kubazali bakhe; Mnu noNksz Bailly (echazwe ngezantsi) eBingerville, eCôte d'Ivoire.
U-Eric Bally wakhula kunye nosapho lwakhe; Abazali, abazalwana kunye noodade eBingerville, idolophu yaseKapa UDidier Drogba. Ukususela kwiintsuku UDidier Drogba, UBingerville wayesele ehlala kwindawo engaphantsi kwayo apho kungabikho ukuphela kwamakhwenkwe xa kukho ibhola kwiinyawo. Omnye u-Eric Bailly wayengashiywanga.
Ngokufanelekileyo, u-Eric Bally waqala ukudlala ibhola elikhuphisanayo ngexesha le-7 ngelixa esikolweni esiprayimari. Emva kwemfundo yakhe yokuqala (ngexesha leminyaka yakhe yobutsha), waba ngumphathi webhodi yefowuni eAbidjan, inkunzi yezoqoqosho e-Ivory Coast.
Ngosuku ngalunye emva kokuvalwa kweshishini, uBailly owayethembele ngabaqeshi bakhe wayeza kukhupha utshintsho (imali) kwifowuni yakhe. UBhailly wakhumbula;
E-Afrika, kukho abantu abahlala kwiimeko ezininzi kunzima kodwa, ewe, njengomntwana ndaqala ukusebenza, "
U-Bailly wathola imali encinci kakhulu kwinkqubo, ngaphambi kokuya kwizilingo kunye namanye amathemba njengoko wayelandela iphupha lakhe lokuba ngumdlali webhola. U-Bailly washiya umsebenzi wakhe wefowuni ngenjongo yokuphandula isivumelwano sebhola yebhola. Abazali bakhe, indlela yakhe yokutya kuphela yintombi yakhe, uVanessa Troupah ngokubonga ngefowuni yakhe yefowuni. Iinkcukacha zendaba yazo zothando zifumaneka kwicandelo loBugcisa boBomi buka-Eric Bailly.
U-Eric Bailly Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts - Ukudlala Indawo
Njengabanye abaninzi abantwana Bingerville, eCôte d'Ivoire, Bngokwenene wakhula wakhupha ukuba ube ngowolandelayo UDidier Drogba. Nangona kunjalo, izicwangciso zakhe zokuba ngumdlali wehluleki zahluleka njengoko ebona ukuba kwakungeyinto engokwemvelo kuye. UBailly waqonda ukuba ikusasa lakhe lalikuloo ndawo yokukhusela emva kokuzibona engagxiliyo naluphi na umchasi ophazamisayo. Watshintsha ngokukhawuleza ekufundeni UDidier Drogba ukuba USergio Ramos lowo kamva ucinga ngesithixo sakhe.
U-Bailly ngoxa wayeseneminyaka engama-10 ubudala eqhubeka nokudlala i-topflight yengingqi enethemba lokuba uza kuphila ngokufanelekileyo ngaphandle kwengcinga yeYurophu. Emva koko, waqeqeshwa ngamaqela amaninzi, ehamba ukusuka kwesinye isithili somzi waya kwesinye ekukhangela isivumelwano.
U-Eric Bailly Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ukunyuka Kwigama
Unyaka we-2011 wawungummangaliso kuBailly owafumana ithuba lokudlala ibhola elikhuphisanayo kwintlalontle yolutsha eBurkina Faso. Kwintlalontle yolutsha, wabonwa yi-Espanyol scouts abaye bafuna ukukhusela abancinci abancinci baseAfrika.
U-Bailly owayeneminyaka eyi-17 ubudala kuphela ngelo xesha wadibana nokulindela kwabo. Wamsuswa ngokukhawuleza kuRCD Espanyol e-Barcelona apho wajoyina inkqubo yabo yolutsha. Ukulibaziseka ekufumaneni imvume yemisebenzi eyenziwe uBailly ilinde iinyanga ze-10 ngaphambi kokuba avunyelwe ukudlala kwiqela labo lase-Espanyol ye-B kwi-Segunda Division.
Ngombulelo emsebenzini wakhe onzima nokuzinikela, italente kaBailly yanda njengoko wayinikezelwa ngumkhuseli omncinci oye wanyuka kwixesha elidlulileyo kunanoma yimuphi umgcini okhuselekileyo phakathi kweqela laseSpain eliphezulu.
U-Bailly othakazelisayo uqala ukuthungela izinto ezithandwa yizithixo zakhe USergio Ramos, UGeorge Godin kunye Gerard Pique. Akuzange kuthathe ixesha ngaphambi kokuba abe La Liga lynchpin kunye nengxaki yokuzikhusela Lionel Messi.
Ngexesha lakhe e-Espanyol, u-Eric Bailly waba ngongoma wokuthetha Derbi Barceloní, a Igama elinikezelwa kwimidlalo yebhola phakathi kweC FC Barcelona kunye neRCD Espanyol. Emva kweemidlalo ze-5 kuphela ne-Espanyol, uBailly wathengwa nguVillarreal. Kwakuye kwiklabhu eyaqaphela nguThe Ekhethekileyo, uJoseph Mourinho owaba ngumphathi we-United.
Ngo-8 Juni 2016, uBailly waba ngumdlali wokuqala wasayinwa nguJosé Mourinho. Ukususela ekujoyineni lebhula, wayeyichukumise.
U-Eric Bailly Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Ukuba nolwalamano luhlala luyinto ebalulekileyo ebomini bukaEric Bailly. UVanessa iTappa (echazwe ngezantsi) ube ngumthando wobomi bakhe ukususela kwimini ebenokukhubazeka ngemali.
U-Eric Bailly watshata intombi kaTanessa Troupah ngoJuni ngo-Juni 2016, iintsuku emva kokugqitywa kweminyaka emine yokuthenga i-£ 30 yezigidi kwi-Old Trafford.
Nangona i-intanethi ekhulileyo kunye neyona nto iphantsi, ininzi intatheli zengingqi zikwazi ukucacisa ubungqina obufihlakeleyo kunye nesimo senhlalakahle kaBailly umfazi onenhlanhla.
Ulwazi oluphela kuphela oluthile kuye kukuba uVanessa wayegijime ngeendlela zokuhamba ngefowuni ngelixa umfana wakhe Bailly baxoshe iikontraka zebhola zendawo. Ngokukhawuleza emva komtshato wabo, kwakukho iingxaki ezibonisa amagama alandelayo;
Yintoni emhlabeni onokudibanisa ubungcali beNgqungquthela YaseNgilandi kwintombazana yase-Ivory Coast eyayenza ngaphantsi kwe-3 ngosuku ngosuku lwefowuni yakhe?
Ekuphenduleni, uVanessa wenza ingxelo elula, ethi uya kuthetha xa ixesha lifanelekile. UNksz Bailly kamva wavula kwaye wabonisa iimfihlakalo ezichaphazela intliziyo ngokuphathelele ubudlelwane bakhe noBailly. Uthe;
"Ndidibana noEric xa ndiqhuba umzila wefowuni e-Abidjan,"
"Asizange sihlangane nendiza, ibha okanye kumthendeleko. Wadibana naye kwi-kiosk yam kunye nama-biscuits ndandithengisa khona. Wayengekho mntu ngoko. Wayedla ukwenza iifowuni kwi-kiosk yam ngekhredithi.
"Namhlanje ungumdlali webhola lezemidlalo kunye neengcali. Anditsho ukuba ufanele usebenze i-kiosk yeselula ukuze udibane nomyeni wakho wesikhathi esizayo. Ndifuna kuphela ukubonisa amantombazana amancinane ukuba athole into eyenzayo, sebenze nzima, unike iingcebiso kunye nenkxaso kumntu wakho ukumnceda ukuba uphumelele ebomini. "
Ngeli xesha, uVanessa wayekhathalele ukulungiswa kwendoda yakhe xa engenakho imali. Wayehlawula uhambo luka-Eric Bailly lokuthutha ukuya kwiiseshoni zoqeqesho. Wena wayenayo ininzi kodwa wayefanele ahlambulule encinci wayenayo kuba wayemthanda kakhulu kwaye wayefuna ukuba aphumelele.
Njengokuba ngexesha lokubhala, isibini sinye sinye unyana kwaye ngo-Matshi 6, 2017, umfazi kaBailly uVanessa ukhulelwe.
U-Eric Bailly Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ubomi obuthathaka
U-Eric Bailly uyaziwa ngokuba mfutshane, kodwa siyabala Jose Mourinho njengomntu ongeke asayine nabani na ongenakukwazi ukuwubamba. Ngalansi kwembonakaliso yendalo enje mfutshane kumdlalo wokudlala.
U-Eric Bailly Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Malunga neSihlwele sakhe
U-Eric Bailly unobuntu obudala obubonga ngenxa yezicathulo zakhe ezimbi (echazwe ngezantsi) apho egqoka egumbini lokugqoka. Ibiyi Juan Mata kwaye Ashley Young ukuba ihlabathi likwazi malunga nesicathulo sakhe njengoko belipostile kwi-Instagram.
Ashley Young ophika ukungazi umnini welo mboniso wagqiba ekubeni baxhomeke egumbini lokugqoka ehlazo.
Yintoni eyenzekayo ngeengubo zika-Eric Bailly ngasekuqaleni kweveki? U-Ashley Young uzama konke okusemandleni akhe ukuchaza ... #MUFC https://t.co/h201W6Eeoy
- Manchester United (@ManUtd) Oktobha 20, 2016
FUMTHETHO UCWADI: Siyabulela ukufunda i-Eric Bailly Childhood Indaba kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
Iindaba zeDiogo Dalot yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ndiya kubingelela ibhola lebhola naphezu kwambala enqabileyo